Ireto sarin'i Aya sy ny mpamosavy an'i Ghibli ireto dia nisafoaka ny maro | Famoronana an-tserasera
Andro maromaro no lasa ary ny marina dia very hevitra izy ireo rehefa nahita ny sary mihetsika voalohany naroson'i Studio Ghibli tanteraka amin'ny 3D.
Ary manana izany izy ireo nahazo tsikera avy amin'ny lafiny rehetra amin'ny fampitahana ireo sary ireo toa nalaina avy tao amin'ny PS2. Na dia marina aza fa tsy maintsy miandry isika raha sary farany izy ireo; ny tsy takatra dia efa navoaka tamin'ny dingana teo aloha.
Una Sarimihetsika Studio Ghibli izay tsy mitovy amin'ny Studio Ghibli. Ity fehezan-teny ity dia afaka maneho tsara izay tsapan'ny maro aorian'ny fahitana ireo sary voalohan'i Aya sy ny mpamosavy.
Una Sarimihetsika mihetsika 3D notarihin'i Goro Miyazaki, zanakalahin'i Hayao Miyazaki ny tenany, ary izay havoaka amin'ny fahitalavitra Japoney NHK amin'ity ririnina ity. Miorina amin'ny boky nosoratan'i Diana Wynie Jones, izay zazavavy kamboty no natsangan'ny mpamosavy; raha ny marina dia afaka mahafantatra bebe kokoa momba an'ity sarimihetsika ity ianao avy amin'ny vaovao hafa navoakanay vao tsy ela akory izay.
Ary amin'ny fotoana izay media sosialy manjaka hevitra, Ireto sary navoakan'i Aya sy ny mpamosavy ireto dia tsy tia na inona na inona raha ny fandraisana azy ireo. Mazava ho azy fa tsy maintsy ho jerena ny sary mihetsika, satria ny iray amin'ireo fanomezana lehibe indrindra amin'ny Studio Ghibli dia ny fahafahany mamelona tahaka ny olon-kafa amin'ny fombany manokana.
Ka ho anay dia tsy hiditra amin'ny fanomezana hevitra isika amin'ny voalohany mandra-pahitantsika an'i Aya sy ilay mpamosavy mihetsika. Horonantsary vaovao iray avy amin'ity studio fampiroboroboana ity izay dingana voalohany noraisina tao amin'ny CGI ary afaka hametraka ny fototra iorenan'izy ireo hiditra amin'ity karazana haitao ity; ary foana rehefa tamin'ny ankapobeny dia nandalo ny fomba nentim-paharazana indrindra ny sarimihetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny volon-koditra ankapobeny dia miaraka amin'ny sary voalohany amin'ny sarimihetsika Studio Ghibli voalohany amin'ny 3D
Ho ahy dia tsy mifanaraka ny manga sy ny 3D. Tsy tiako ny bika amin'ny ankapobeny, na amin'ny sarimihetsika na amin'ny lalao video.